ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5ကိုယ် Love စကားပြောရန်ကို Creative နည်းလမ်းများ
“မင်းကိုချစ်တယ်”, ဒီတစ်ခုကဲ့သို့စင်ကြယ်အဖြစ်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောကြောင်းအနည်းငယ်အခြားစာကြောင်းများရှိပါသည်. ဤသုံးပါးသောစကားမကြာခဏသင့်ချစ်ရာသခင်၏စိတ်အခြေအနေတက်ပေါ့စေရန်လုံလောက်သောများမှာ; သို့သော်, သင်ပြောတချို့ဖန်တီးမှုနည်းလမ်းများကိုချမှတ်လျှင် “မင်းကိုချစ်တယ်”, သူမ၏မျက်နှာပေါ်တွင်သှားပွီး။ ပွုံးအကယ်စင်စစ်ပင်ကျယ်ပြန့်ဖြစ်လိမ့်မည်.
ထိုသုံးဦးမြင့်မြတ်သောစကားသည် uttering ၏ငါးပါးဖန်တီးမှုနည်းလမ်းများမှာလေ့လာကြည့်ပါ; အကယ်စင်စစ်သင်သည်အနည်းငယ်ထွက်ကြိုးစားနေချစ်လိမ့်မည်, အားလုံးကလျှင်.
1. လက်ဆောင်တစ်ခုနှင့်အတူဆိုရမည်: သင်ကဖြစ်နိုင်သည်ဟုရှေးအကျဆုံးနှင့်သင့်ကိုငါချစ်ကြပြီဟုပြောအများဆုံးကျယ်ပြန့်တဲ့နေရာမှာအသုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ဘယ်လိုဤလမ်းဖန်တီးမှုကြောင်းအံ့သြရပါမည်. သင်ရုံတစုံတခုသောဆုကိုကောက်ရန်အကြံပြုကြသည်မဟုတ်ဆိုတော့ဒီအိုင်ဒီယာကွဲပြားခြားနားသည်, လက်ဆောင်သည်မှပူးတွဲပါအမှတ်တရများရှိပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏ချစ်ရာသခင်သည်အရာတစ်ခုခု.
၎င်းသည်သင့်အားသင်၏နှစ်ဦးအတူတကွသုံးစွဲကြီးစွာသောအချိန်လေးကိုဗန်းပြပေးတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုတစ်ဦး collage နိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်သင်အတူတကွနေထိုင်နေစတင်ခဲ့အခါသင်ကိုဝယ်ယူကော်ဖီမတ်ခွက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးစုံတွဲတစ်တွဲရှိနိုင်ပါသည် (သူတို့အပေါ်သို့အနည်းငယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အရာရေးသားခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုတစ်နည်းနည်း personalize သေချာအောင်; သင်တစ်ဦးမျှသာရေးသားခြင်းမှာလည်းမကောင်းမွန်မှန်လျှင် “မင်းကိုချစ်တယ်” လုပ်မည်.
2. သင်သည်မိန်းမအဘို့ချက်ပြုတ်နိုင်: နှလုံး-shaped ကွတ်ကီးများပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်စကားများနှင့်caffÃ¨ Mocha ၏ခွက် “မင်းကိုချစ်တယ်” ချောကလက်ကိုသုံးပြီးပေါ်မှာရေးထားတဲ့ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာ.
သူမ၏လက်ကိုကိုင်ထားပါ, ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်ကြဆို, သူcaffÃ¨ Mocha တစ်ကျိုက်သောက် ပူဇော်.. သူမသည်ကျိန်းသေလာရန်နှစ်ပေါင်းယခုအချိန်တွင်မှတ်မိနေလိမ့်မည်.
3. စေးကပ်မှတ်စုများကိုသုံးပါ: သင်ကသုံးနှလုံးနွေးထွေးစကားကိုကြားလျှင်စတင်ရန်နံနက်သင့်ချစ်သူတို့ရဲ့စေချင်? ကိုယ့်အနီရောင်သို့မဟုတ်ပန်းရောင်စေးကပ်မှတ်စုများကို အသုံးပြု. ရေချိုးခန်းကိုထင်ဟပ်ပြသမှုအပေါ်တစ်ဦးနှလုံး-shaped collage အောင်ကကျနော့်ကိုအပေါ်သင်ချစ်သောသူရေးဖို့.
အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သူမ၏မျက်နှာကိုမြင်လျှင်မီကြောင်းသေချာစေရန်လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်, သင်၏မယားသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဆင်းလှသောစကားများကိုတွေ့မြင်; ထို့နောက်နောက်တွင်မှနွေးထွေးစွာပွေ့ဖက်ခြင်းဖြင့်လိုက်နာနှင့်စကားများမြည်တမ်း “မင်းကိုချစ်တယ်” သူမ၏နားအပါး၌.
4. သူမ၏အလုပ်အတွက်အဆင်သင့်ရကိုကူညီပါ: သင်၏မယားသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ရှေ့ကနေတစ်ဦး hectic နေ့လျှင်ဤသူသည်ငါအထူးသဖြင့်သင်ချစ်သောသူဟုဆိုလျက်များစွာသောလမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်.
မိမိအဝတ်ကို Iron, မိန်းမအဘို့ရိုးရှင်းတဲ့ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြင်ဆင်မည်, သူမအလုပ်အတွက်အရွက့်ရှေ့တော်၌အသူမ၏သူမ၏ရုံးခန်းအိတ်အဆင်သင့်ရရန်ကူညီငါသည်သင်တို့ကိုချစ်ကြဆို.
သင်အချိန်ရှိပါက, သင်သည်လည်းသင်၏အလုပ်ခွင်သို့ဦးတည်ဦးတည်ရှေ့တော်၌ထိုရုံးတွင်သူမ၏ drop နိုင်.
5. စံချိန်: ဆိုလိုတာကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်သို့မဟုတ် nth အချိန်အဘို့ပြောနေဖြစ်စေ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖော်ပြမှာများစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင့်ချစ်သူတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်သည့်အသံကြောင့်ချစ်လိမ့်မည်.
သင်၏မျက်စိကိုအစဉ်အမြဲပြောဆိုလျက်ရပါမည် “မင်းကိုချစ်တယ်” သင်နှစ်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ, ဒါပေမယ့်အချိန်က uttering လည်းအလွန်အမင်းအရေးကြီးပါတယ်; ထိုသုံးဦးကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောစကားဟူမူကားများ၏အထက်ပါနည်းလမ်းများထုတ်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်, သင်သာသင်နှစ်ခုအကြားနှောင်ကြိုးပင်အားကောင်းစေတော်မူမည်.